Venezoelà: Fetiben’ny bolongana sy fahalalaham-pitenenana an-tserasera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Aogositra 2010 8:58 GMT
Vakio amin'ny teny English, македонски, বাংলা, Español
Ny Global Voices teny Espaniola dia te-handrisika ny famahanam-bolongana sy hanondro-daza ny mpamaham-bolongana amin'ny alalan'ny “Festival des Blogs” na fetiben'ny bolongana. Avy amin'izay fomba izay no hahafahan'ny GV teny Espaniola mandray anjara mba hahitana [hamoronan'ny mpamaham-bolongana] zava-baovao misy fanadihadiana sy famakafakana avo lenta. Hahazo tombon-dahiny amin'ny mora hahitana kokoa izay zava-soratany hisongadina ato amin'ny Global Voices ny mpamaham-bolongana mpandray anjara. Toy izao ny andinindinin'ity fetibe laharana faharoa ity:
Firenena asongadina: Venezoela
Ny faritra sy ny vohikala fantenana amin'ity fetibe faharoan'ny bolongana ity dia i Venezoela, izay fanta-daza amin'ny hamaroan'ny olona mazoto an-tserasera ary misimisy ihany koa ny mpiara-miasa avy ao no afa-mampiely ity hetsika an-tserasera ity. Ny ankamaroan'ny mpamaham-bolongana malaza moa dia hita ao Caracas renivohitra fa manantena izahay fa handray anjara ihany koa ny mpamaham-bolongana avy any Maracaibo, Valencia, Maracay, Barquisimeto ary ny tanàna maro hafa tsy voatanisa. Tsy voafetra ho amin'ireo mpiresaka ity lohahevitra ity ihany ny mpandray anjara fa afa-mandray anjara avokoa ny mpamaham-bolongana rehetra.
Lohahevitra: Venezoela: Fahalalaham-pitenenana eto amin'ny aterineto.
Mampisokatra kokoa ny fanehoan-kevitra ny fisonogadinan'ny fitaovan-tserasera vaovao sy ny valan-tserasera [media social]. Saingy mianoka ireo tanteraka ve ny ao Venezoela? Tiantsika rehetra ny maneho hevitra, saingy ny dingana voalohany ihany izany. Misy ve ny fifampiresahana an-tserasera? moa ve mamaky na mihaino ny hafa isika sa dia vondron'olona iray ihany no miteny irery ka manakana ny tena famondronan-kevitra? Inona no mitranga raha mirona any amin'ny tsy fifampizakana sy ny fifanilihana ny hevitra? Etsy ankilany, lasa kiady aderadera hanaronana tombotsoa miafina ve ny fahalalaham-pitenenana? Ahoana ny amin'ireo vondron'olona tsy mba misy misolotena eto amin'ny aterineto? Voaaro ve ny fahalalaham-pitenenana ao Venezoela? Ahoana ny ataon'ny mpiserasera hiarovana ny zony?
Afa-mandray anjara avokoa ny mpamaham-bolongana Venezoelana amin'ny alalan'ny famoaboasana ilay lohahevitra ao amin'ny bolongany. Tsy tokony ho nalai-tahaka ny lahatsoratra, izany hoe amin'ny teny hafa dia asa-soratr'ilay mpamaham-bolongana. Tsy tokony ho nadika avy any an-kafa na nivoaka pirinty ivelan'ny fotoana nanaovana ity filazana ity. Ny endriny, ny halava ary ny bikan'ny lahatsoratra moa dia izay tian'ny mpamaham-bolongana hanaovany azy.
Mivelatra ny fifantohana amin'ny lohahevitra. Mety ho famaliana ny iray amin'ny fanontaniana na hafa izay heverin'ny mpamaham-bolongana ho zava-dehibe ho azy kokoa. Rehefa nahavoaka ny lahatsorany ny mpamaham-bolongana dia tsy maintsy mandefa mailaka any amin'ny juan.arellano [at] globalvoicesonline.org miaraka amin'ireto filazalazana manaraka ireto:
Rohy na URL an'ny lahatsoratra
Misy ny badge vonona, izay sary azo ampidirina ao anatin'ny lahatsoratra, azon'ny mpamaham-bolongana apetraka ao amin'ny vohikalany mba hanoroana fa mandray anjara ihany koa izy. Vantany vao tafapetraka ao amin'ny bolonganao ny badge dia tokony ho voalahatra ny lahatsoratra.
Rehefa tapitra ny fe-potoana dia angonina sy hofehezina mba hamoahana azy ato amin'ny Global Voices. Mety ho tsy tafiditra ao anatin'ny famehezana ny lahatsoratra sasany noho ny fahateren'ny toerana, fa miankina amin'ny isan'ny mpandray anjara. Raha misy ny tiana anontaniana dia ao amin'ny mailaka voalaza etsy ambony ihany no avantana izany.
Programa: mandritra ny fety:
- Fiantsoana, fanasana ary fampahafantarana . Amin'ny alalan'ity lahatsoratra ity sy mandritra ny fotoana fandraisana anjara.
- Fotoana andraisana anjara: 5-8 Aogositra
- Fotoana fifantenana sy famehezana ny lahatsoratry ny mpandray anjara. 19-22 Aogositra
- Famintinana sy famoahana ny lahatsoratra Global Voices ho amin'ny teny Espaniola. 23 Aogositra.
Fanamarihana: Tsy fifaninanana akory izy ity ka tsy hisy ny mpandresy sy y resy. Natao izy ity ho fampiroboroboana ny fandraisana anjara, fiarahana miasa ary fijoroana vavolombelona momba ny lohahevitra mba hahafahana manao tera-bary ny lohahevitra fahalalaham-pitenenana amin'ny aterineto ao Venezoelà.
Manantena ny fanohananao, ny fiasanao miaraka aminay ary ny fandraisanao anjara.
Naotin'ny mpandika ho amin'ny teny Malagasy: Mety ho azontsika atao ihany koa ve ny manao tahaka ity na dia mandalo krizy tanteraka aza ny tontolon'ny bolongana malagasy amin'izao fotoana izao?